Janaayo – Blast Off to Kindergarten
Ilamahaaga bar in siyaabo fiican laysugu khiilaafo. Kala hadal sida uu iskaashi ula dhexmaari lahaa kuwa kale iyo siyaabaha lagu muujiyo carada, wareerka, in si ra’yi duwan lagu dhiibto ayadoon uusan dhicin gacanqaad, qaniinyo, ama dabeecado kale ee aan loo dulqaadanin karinin.
Ilmahaaga ku abaabi in ay isticmaalaan “fadlan” iyo “mahadsanid” adiga aad ereyadaasi ku dhaqantid. Marka ay isticmaalaanna u mahadceli ilmahaaga.
Adeegsashada “Feelings Puppets (Bomboolada Wax Dareema) aya ilmahaaga ka cawiinaysa waxa ku saabsan dareemka. Ilmahaaga ha sawiro ama sawirro ha isugu aaddiyo si ay u soo baxaan wejiyada farxadda, murugada, carada, iyo yaabka. Sheeka gaaban uga sheekee oo ilmaaga inta boombolada kor u qaado ha ugu metelo sida ay dadka sheekada ku jira ficilkooda yahay. Kaddibna ilmahaaga sheekada ha sheego adigana boombalada dareemo ou yeel.
Ilmahaaga weydii, “Maxaa kaa farxiya?” jawaabahooda ku qof booska banaanaan iyo kaddibna heeska “Feeling Song-Heesaha Dareemka” ku aaddi “Are You Sleeping?” Heeska dhowr jeer ku celceli adiga oo ku dara dareemo kale sida: xanaaqsan (fiiri sida aan gafuurka u taagayo), shaacireya (fiiri sida aan u boodboodayo), murugada (fiiri sida aan u oynayo)
Waan faraxsanahay, waan faraxsanahay.
Fiiri sida aan u dhoolo caddenayo, fiiri sida aan u dhoollo caddeynayo
Farxad, farxad, farxad,
_______ ayaa iga farxiya.
Eeg sidaan u dhoollo caddaynayo, u dhoollo caddaynayo.
Caro ayaan dareemaya, Caro ayaan dareemayaa..
Eeg sida aan wejiga u kuuso, u kuuso, eeg sida aan u kuuso
_______ iga caraysii..
U soo gad qalmaan, calaameeyada, iyo warqadaha ilmahaagana ku dhiirrigali in ay wax sawiro ama xarriqo. Marka layska doondoono in wax la qor qoro ama wax la akhristo waa tillaabo muhiim oo qofka ka dhigaysa akhriste iyo qoraa!
Ilmahaaga ku caawi in uu isticmaalo gacamahiisa adiga oo u ogolaada in uu isticlaalo qalmaanta midabyada leh, qalmaanta, iyo maqasyada. Warqadaha wax lagu qoro ku xarayso meelo kale ee guriga kamid ah.
Xirafadaha Tababar-qaadashada Bishaan
Dugsi maalmeedka ilmahaaga waxa ay noqonaysaa wax si joogto loo raacayo, iyo arrimo la filayo in ay dhacaan isla wakhtigaas maalin kasta. Saymayso jadwal maalmeedkaaga oo kamid yihiin soo kicidda; quraacda, qadada iyo cashada; wakhtiga maawelada; wakhtiga daraasaadka iyo shaqada; wakhtiga nasashada; wakhtiga seexashada. Dhiso wakhti seexasho ee cunuggaaga siinaysa 11 – 13 saacadood ee habeenkii uu ku seexdo. Diyaarso jadwalka wakhtiga la seexanayo taaso ilmahaaga u sheegaysa wakhtigan waa wakhtiga jiifka laysu diyaarinayo. U sheeg waxa aad maalintaas qabatay. Waxyaalo deggaansha ah samayso sida book la akhrisanayo ama sheekada lagu seexinayo.